Rava ny dinika: Inona indray no hitranga?
2009-02-25 @ 22:00 in Politika
Hita mazava fa nisy olona diso paika teto. Ny maraina androany alarobia 25 febroary 2009 dia efa nisy fanentanana tao amin'ny radio Viva ny hanondroan'ny mpiasam-panjakana solontena telo isaky ny departemanta misy azy any amin'ny minisitera any hidinika ao amin'ny foibeny ao Andohan'Analakely izao. Mazava ny tian-katao fa ny hanentanana sy hamoriana araka izay azo atao ny mpiasam-panjakana mba hitovy lenta tahaka ny tamin'ny 1991 indray ny tolona. Mariho tsara anefa fa tamin'ny 1991 dia nahazo ny karamany ara-dalàna soa aman-tsara ny mpiasam-panjakana am-bolana nitokonany na dia nikatona aza ny biraom-panjakana rehetra fa ahian'ny mpiasam-panjakana kosa ny tsy hahazoan-dry zareo ny karamany amin'ity indray mitoraka ity raha vao manapaka eo izy. Tena masaka tao an-dohan'ny TGV hatry ny ela noho izany ny hiverenana hamory olona eo amin'ny kianjan'ny 13 mey indray rehefa tonga ny fotoana ary mahafantatra izany soa aman-tsara ny filoha, araka ny fijeriko azy. Niova tampoka moa ny fandaharam-potoanan'ny mpitolona tamin'ny Sabotsy 21 febroary 2009 raha nisy iny diabe saiky hotontosaina iny.
Somary nahavariana ahy ihany manko io fiovam-pandaharam-potoana tamin'ny ora farany io, tsy fantatro aloha tamin'io fotoana io na efa fantatry ny TGV na tsia ny nisamborana an'Atoa Ranjivason Jean Théodore na tsia, fa dia araka ny toe-draharaha aloha io. Heveriko fa kendry tsara ny an'ny FFKM nametraka ny ora ho amin'ny 1 ora folakandro tamin'io sabotsy 21 febroary 2009 io tsy hanaovana izany diabe izany izay nampanahy be ihany ny mety ho niafarany, sady ny mpitolona rahateo tsy mahalala izay hahafaty azy na dia samy mihevitra ny ho fetsifetsy aza ny maro. Nahatsikaiky ihany koa anefa ny faharetan'ny fotoana isaky ny mandeha ilay fihaonana fa tsy misy maharitra ora iray mihitsy (in-telo misesy izay). Mazava loatra araka ny fijeriko fa fialana olana fotsiny ilay tamin'ny sabotsy iny nefa dia nanaiky i Andry Rajoelina.
Efa tarataratra ihany fa raharaha tsy ho vanona izy ity. Mifandaka atsimo sy avaratra manko ny resaka tiana ho entina. Ny ao amin'ny TGV mitaky ny hamotsorana ny voasambotra, fahazoana miteny amin'ny alalan'ny TVM mandritra ny telo minitra (te-hahalala izay tena misy ny trano fiasana vaovao angamba izy satria toa voatazona ho tsiambaratelo aloha ny toerana misy azy na voaaro fatratra), fanesorana an'i Guy Rivo Andrianarisoa tsy ho PDS ny tanànan'Antananarivo intsony. Matoa anefa ny Filoha miresaka zavatra tsy eritreretin'ny Ben'ny tanàna efa voaongana mihitsy dia hafa ny sainy sady mety ho fanarian-dia no tena tanjony, fandaniam-potoana hiomanany ihany koa amin'izay kasainy hatao rahampitso sy rafakampitso. Mazava dia mazava fa tsy hiditra resaka tetezamita mihitsy ny filoha nefa dia io no asesiky ny sasany, indrisy fa na dia ireo heverina ho manam-pahaizana aza dia milaza izany ary na dia ny gazety heverina ho tsy miandany aza dia mieritreritra ny karazana rafitra ajoro amin'izany tetezamita izany.
Nampisy fiovan-kevitra teo amin'ny filoham-pirenena ve ny fitsidihan'ny tao amin'ny Antenimieran-doholona azy ka namoahan'izy ireo ihany koa ny tsy fankasitrahana velively izany rafitra tetezamita izany. Ny hita aloha dia lasa nandeha tany Toamasina sy Mahajanga izy, tsy hamory vahoaka araka ny nolazain'ny tao amin'ny Viva Radio tamin'ny maraina fa ny lehibebe tao an-tanàna sy indrindra ny miaramila tao amin'ireo toerana ireo ka namatrapatraran'izay nanatrika indray fa hanaja sy hankatò ny ara-dalàna ny miaramila (sady ho fahafaham-baraka ho azy araka ny hevitra naposako tany an-kafa raahteo izany hidiran'ny tafika avy any ivelany izany) hoe Tsy ilaina ny rafitra tetezamita fa rafitra maharitra hampisy fanaraha-maso tsara ny asan'ny mpanatanteraka (antenimiera). Azo lazaina fa tsy nataon'ny filoha ho laharam-pahamehana velively ny fihaonana tokony hataony tamin'i Andry Rajoelina. Tamin'ity fotoana tsy tontosa ity anefa dia anelanelan'ny 20 sy 30 teo ho eo ny isan'ny delegasiona nentin'ny TGV hokasaina hanatrika ny fotoana ve? Ny an'ny filoha kosa dia solontena roa monja no tonga ary nahalatsa-panontaniana hoe fa angaha hisy tsanga-tanana hatao ka nentina jiaby ity ekipa ity?
Mba manana ny hevitro mikasika ny tetezamita letrezana ity ihany koa aho fa hevitra telo ihany no hambarako etoana: (1)Fandaniambola iniana itadiavana fanoloana mpitondra no dikan'ny tetezamita, noho izany tsy mandeha ilalana amiko. Eto avokoa manko no ampidirina ny akamakama tsy nahazo toerana rehetra nefa dia hokaramaina avokoa ireo rehetra ireo. Ary dia hiova endrika indray ny fandaniam-bola mety hihoam-pampana hataon'ny Fanjakana, nefa moa tsy aleo ve samy manana ny pitipitiny aby ;) ? (2) tsy hisy drafitra maty paika na tondrozotram-pampandrosoana ny firenena fa fampandehanan-draharaha fotsiny no hatao, noho izany, mety ho tafiditra ho fanapahan-kevitra ny tsy handraisana ny vovonana roa (Afrikana sy mpiteny na mampiasa ny teny frantsay) izay tsy zakan'ny mpanohitra mihitsy ny mihaino azy fa heveriny ho tsy misy dikany velively ireo.(3) Tsy nikatso tanteraka akory ny toe-draharaha teto (fa fanapotehina no tena nisy) ary raha tadiavina ny hisian'ny fanekena ny fivondronambe iraisam-pirenena dia tsy maintsy izay mifanaraka amin'ny Lalampanorenena efa natsidik'izy ireo ihany no vahaolana raisina voalohany toy ny fandravana ny antenimieram-pirenena sy fifidianana depiote vaovao. Eo vao hita mazava ny misy ny maro an'isa; ka eo no ivoahan'ny olona na antoko na fikambanana hitondra sy manana ny ampahany maro ao amin'ny governemanta, ary tsy ilàna ny fanalana ny filoham-pirenena na oviana na oviana izany hatreto. Tsy ilaina tenenina akory izany hoe goernemanta fampihavanam-pirenena sy ny karazany izany, fa ireny hatrany no mampisy ny zavatra sadasada tsy hampandroso an'i Madagasikara na oviana na oviana. Ny Fampanajana hatrany ny rafitra demaokratika nefa hametrahana tsikelikely ny fivoarana no antony tsy ilana ny tetezamita ao anatin'izany rehetra izany.
Ity misy tranga iray, any ambanivohitray (miala tsiny kosa aloha tsy hilaza ny toerana) eto amin'ny faripiadidian 'Antananarivo, dia anisan'ny kaominina nahazoan-d Ravalomanana Marc ampaham-bato kely indrindra tamin'ny 2006. Ny mahavariana amin'ny resaka ataon'ireo olona any ka miresaka dia samy nisento avokoa rehefa tsy voaongana ny filoha tamin'ny andron'ny alakamisy nanafihana minisitera iny. "Rehafa tsy nahala azy tamin'iny dia tsy hahala azy intsony!", hoy ny ambentin-dresak'izay ireo. Olona tsy mety hiakatra an'Antananarivo Renivohitra noho ny korontana amin'izao fotoana izao ireo nefa dia izay ny fomba fiheviny. Tsy mahalala sy tsy te-hahalala izay dinika nisy teo ry zareo amin'ny ankapobeny. Tsy fantatro izay any amin'ny kaominina hafa any ambanivohitra any, nefa tsy azo itarafana ny tontolo ambanivohitra ankapobeny velively io voalazako io na dia nampieritreritra ihany aza.
Fa hiverina amin'ny resaka ihany aho. Efa nambarako tany an-kafa ihany koa fa tokony ho karazana fihaonam-bem-pirenena ihany koa no takian'i Andry Rajoelina mba tsy hahatsiaro ho voailikilika ny hafa. Mety ho hitan'ny sasany angamba izay hevitro izay ka nahatonga ny antson'ny filoham-pirenena hitodika amin'ny antoko politika sy hiantso izay rehetra vonona amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'izy ireo. Toa tsy te-hamaly izany anefa ny antoko hafa fa toa izao fitakiana hanalana ny filoha sy ny tetezamita ary hamotsorana an'i Jean Theodore Ranjivason ihany no takiana. Tsy nahay nanararaotra indray ve ny antoko hafa teto? Heveriko anefa fa hafatra ankolaka tian-kampitaina amin'i Andry sy ny hafa io nitazonana an-dRajivason io fa dia tsy haiko foana raha mahazo resaka na tsia ny hafa. Mialoha ny farany: Heveriko fa ninia ny tsy hanatrika ilay fihaonana androany ny filoha ilazana fa tsy hidinika resaka tetezamita na oviana na oviana izy, raha vao izay no lohahevitra eo!
Farany: nampieritreritra tokoa ny niantsoan'ny Arshevekan'Antananarivo ny miaramila hiaro ny olona sy ny fananany araka ny sata ijoroany. Efa nahatsinjo zavatra sahady ve izy manao izany? Efa nanapaka rahateo i Andry fa ho tapaka hatreo ny fifampidinihana. Hiditra amin'ny fanaintainana andininy faharoa amin'izay ary ve isika sa hisambotra izay rehetra mandika lalàna amin'izay ny mpitandro ny filaminana rehetra? Efa hafatra mipetraka ihany koa manko ny famoriana ny mpitandro ny filaminana tany Toamasina sy tany Mahajanga ireny. Tena rediredy koa izany vitako androany izany!
jentilisa 25 febroary 2009